2017 Capricorn Horoscope - I-Capricorn
I-Horoscope ye-Capricorn yonyaka ka-2017 x
Umoya:Uthando, ulwamkelo, ibhalansi, ubutyebi.
Iindawo zokundwendwela:Washington, San Marino, China.
Izinto onokuzifunda:Ukufunda ngokukhawuleza, ukudlala isixhobo, ukutyibilika emkhenkceni.
Lo ayingonyaka apho iVenus iya kuba luncedo kuphawu lwakho, kwaye nangona iingcinga ezininzi ezonwabileyo zilindelekile njengoko zihamba ngeePisces ngoJanuwari nango-Epreli, udla ngokulungiselela iqabane lakho okanye izithandwa ezinokubakho ukuya kwinqanaba lentlungu. Eyona nto ibalulekileyo ngeli xesha kukuba ungatshoni kwiimvakalelo zokuziva unetyala kunye nokungafaneleki, nangona xa abantu abaninzi bekucinezela, kwaye bakuxelele ukuba into oyenzayo ayilungile ngokwaneleyo. Ngakolunye uhlangothi, umlawuli wesibonakaliso sakho useseSagittarius kwaye ixesha elide unokholo kwiziphumo ezilungileyo kunye nethemba elaneleyo, yonke into iya kuhamba ngokwesicwangciso kwaye iphuhlise njengoko ufuna.
Ngelixa uzama ukuba nenyani malunga nolindelo lwakho, amadabi akho angaphakathi angakushiya ukhangela utshintsho lwendawo kunye nembono ukuze ubone izinto ngokwenyani njengoko zinjalo. Ukuba ufumana ithuba, hamba, kude kwaye ngokubanzi njengoko ufumana ithuba. Ukushukuma kweSaturn ukuya nokubuya kumbindi womnyele wethu kuya kukusondeza ekuqondeni eyona nto ifunwa yintliziyo yakho, kuphela ukufiphalisa umbono wakho kwakhona kwaye ujongane nawe nemingeni yeenkolelo eziqinileyo ezingentle.
U-Epreli uya kuba yinyanga yemibingelelo emikhulu kwaye nangona iVenus ibuyela ngasemva kwisibonakaliso sePisces iya kukukhumbuza injongo kunye nentsingiselo yezenzo zakho, akuyi kuba lula ukujamelana nokulahlekelwa kwakho. Yiyeke, kuba ukuhamba kwexesha kuya kukukhokelela kwicala olifunayo, ukuba uyakholelwa kuphela.
Ikwindla izisa utshintsho olumangalisayo ebomini bakho, yandisa i-horizons yakho kwaye izisa abantu abatsha kwihlabathi lakho. Ubuhlobo buya kukhula kwaye uya kuba nethuba lokubonisa elona cala lanelisayo lobuntu bakho phakathi kwabantu abakuqondayo.
Ukuqala kuka-2017 kunokuzisa iingxaki zempilo eziguqukayo ngendlela yakho, kwaye eli lixesha lokuba ulumke kakhulu ngokukholelwa yonke into ugqirha wakho akuxelela yona. Jonga lonke ulwazi kabini kwaye ucele olunye uluvo ukuba ngaba oku kufuneka uzive uqinisekile malunga nemingeni yakho yomzimba. Imiba engapheliyo iya kubonisa ubuso bayo obubi kwindawo ethile phakathi kuka-Epreli no-Agasti, ikwenza ube novelwano kuzo zonke iimpembelelo zangaphandle kunye namava abiwe nabanye abantu. Ngeli xesha, amajoni akho omzimba aya kufuna ukongezwa, ngakumbi ngokuthatha iivithamini. Eyona ngxaki yakho inkulu ithande ukumila ngenxa yokunqongophala kwamandla ngoNovemba, ke hlala usendleleni, uzilolonge, kwaye ugcwalise iibhetri zakho ngenkqubo esempilweni yomzimba.
Idealization isitshixo kulonwabo ngeli xesha, kwaye kunokuba ngcono ukuhlala kwiqamza elipinki leemvakalelo xa uVenus ezifumana ePisces esenza zonke iintlobo zobudlelwane obuyimfihlo zibekho. Uya kucinga ngabantu abanomtsalane emfihlekweni ngexesha lokuhamba kolu phawu kunye nendlu yakho yesithathu, kwaye oku kunokuthatha ukugxila kunye nokusebenza kakuhle emsebenzini. Ukucoca ingqondo yakho kunye nehlabathi lakho lonke kwiingcamango eziphosakeleyo, ubuxoki, okanye iingcamango ezininzi, chitha ixesha elaneleyo ukunxibelelana nendalo, ucamngce, kwaye ube wedwa xa ufumana ithuba lokuba. Ukuzenzekelayo kuya kukunceda uzive ungcono kwaye kuya kufuneka ufumane indlela yokunikezela kuyo. Ukulumka yinto oyaziyo kakuhle, naxa udala iingxaki wena kunye nabanye abantu, kodwa ukuguquguquka nokungakhathali okuzenzekelayo kubonakala kulahlekile kuwe, kulinde ukufunyanwa.
NgeJupiter kuphawu lweLibra, onke amathuba oshishino ngexesha lenxalenye enkulu yalo nyaka aya kwanelisa ngokwezimali. Iingcango ziya kuvuleka phambi kwakho, kwaye uya kuba namathuba amaninzi okuphucula umfanekiso wakho kunye nesikhundla sakho, ukwakha umsebenzi obuhlala uwufuna. Nangona kunjalo, oku kukwathanda ukuthetha ngokuchitha ngaphezulu kunye nobudlelwane obunganyanisekanga njengoko unokucinga. Gcina ubudlelwane bakho kunye nemali. Izinto ezothusayo zinokuqhubeka nokuza kodwa nguwe onokuthi ukwazi ukuzisebenzisa ukuya phambili, ungabavumeli ukuba bakutshayele ezinyaweni zakho. Ukuphela kwe-2017 kuzisa utshintsho olukhulu kwihlabathi lakho, njengoko iSaturn ihamba ngaphaya kombindi wegalaksi yethu kwaye ikukhumbuze nge-synthesis uMphefumlo wakho obopheleleke ukuba ufumanise, okutyhalela kwicala elithile. Eli nqanaba likhethekileyo linqaku esilijikelezayo sonke kwaye uya kufumanisa ukuba yintoni etsalayo ngomxhuzulane owomeleleyo, okukhokelela kuphela kwimeko yokulinganisa. Kanye njengoko uqaphela ukuba ungowaphi, ukuphela kukaDisemba kuya kukukhumbuza ezo nzulu zeemvakalelo oye wazishiya zingazinzi kwixesha elidlulileyo, njengoko iSaturn ihambela uphawu lweScorpio.
Virgo Ngena Pisces Khetha Uphawu I-Capricorn